Madaxweyne kale oo Afrikan ah oo toddobaad gudihiis ka bad-baaday isku day dil - Idman news
Madaxweyne kale oo Afrikan ah oo toddobaad gudihiis ka bad-baaday isku day dil
Antananarivo (Caasimada Online) – Xafiiska dacwad-oogaha guud ee dalka Madagascar ayaa sheegay inay fashiliyeen isku day lagu dili lahaa madaxweyne Andry Rajoelina, islamarkaana ay xireen dhowr tuhmane oo “Ajaaniib iyo Malagasi ah.”
Maalintii ciidda ayey aheyd, madaxweynaha kumeel-gaarka ah ee dalka Mali, Assimi Goita uu isna ka bad-baaday isku day dil oo loo adeegsaday mindi ah intii lagu guda jiray salaadii Ciida-Carafo ee Masjidka weyn ee Bamako, sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaas.
Weerarka ayaa waxaa fuliyey laba nin oo mid uu mindi watay, kuwaas oo la sheegay inay usoo dhaqaaqeen dhanka Goita, kaasi oo durba ay la ordeen ciidamada amniga.
Qoraalk kasoo baxay Madaxtooyada ayaa lagu sheegay in la fashiliyey weerar lagu dili rabay madaxweyne Assimi, islamarkaana ay ka hortageen laamaha amaanka iyo ilaalada madaxweynaha.
“Weerarka waxaa durbadiiba ka awood roonaaday laamaha amniga. Baaritaannadu way socdaan,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Madaxtooyada ee la xiriiray weerarka Assimi.
Goita, waa 38 jir kornayl ka tirsan ciidamada gaarka ah, wuxuuna xukunka la wareegay bishii Juun, kadib markii labaad oo uu afgambiyey madaxweyne muddo 9 bilood gudahood ah.
Previous WARKA DUHUR (22-07-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Musqul dahab lagu xardhay oo laga helay guri nin boolis ah
Dib u milicso wixii ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir 2 Sanno ka hor
Xog: Beel Cali Guudlaawe ka hor-istaagtay shir lagu qabtay magaalada Cadale July 24, 2021